Fampiakarana an' i Maria - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fampiakarana an'i Maria)
Ny Fampiakarana an'i Maria any an-danitra, dia finoana ôrtôdôksa sy katôlika izay milaza fa i Maria renin' i Jesoa dia tsy maty sahala amin' ny be sy ny maro fa niditra avy hatrany any amin' ny voninahitr' Andriamanitra, ka lazaina koa ho "fiakarana any an-danitra" izany.
Fampiakarana an' i Maria, nataon'i Fermo Ghisoni da Caravaggio tamin'ny taonjato faha-16.
1 Lovam-pampianarana zary tenim-pinoana
3 Ny hevitry ny Prôtestanta
Lovam-pampianarana zary tenim-pinoanaHanova
Tsy misy fototra mivantana avy amin' ny Baiboly izany finoana izany nefa efa ela tao amin' ny Lovam-pampianaran' ny Fiangonana tany Atsinanana sy tany Andrefana izay nankalaza azy nanomboka tamin' ny taonjato faha-8. Ny Fiangonana tandrefana dia nandraikitra azy ho tenim-pinoana (na dôgma) tamin' ny taona 1950 fa ny Fiangonana tatsinanana kosa dia tsy namaritra an' izany ho tenim-pinoana. Ny ahitana an' io tantara io dia ao amin' ireo soratra apôkrifa na pseodepigrafa. "Torimason' ny Renin' Andriamanitra" no ilazan' ny Ôrtôdôksa an' izany fa tsy "Fampiakarana".
Ao amin' ny Fiangonana katôlika dia ankalazaina amin' ny fomba manetriketrika ny Fampiakarana an' i Maria Virjina isaky ny 15 Aogositra ka matetika dia marihina amin' ny fanaovana filaharam-be izany. Ny Fiangonana anglikana dia tsy mankalaza intsony ny Fampiakarana an' i Maria nanomboka tamin' ny taona 1549, nefa ny 15 Aogositra dia natokany hankalazana an' i Maria Virjina, tsy misy ifandraisany amin' ny nampiakarana azy any an-danitra.
Valo andro aorian' ny fankalazana ny Fampiakarana an' i Maria no ankalazana an' i Maria Mpanjaka, izany hoe amin' ny 22 Aogositra.
Ny hevitry ny PrôtestantaHanova
Mitsipaka an' io fankalazana io ny fiangonana kristiana hafa. Ny Prôtestanta dia mitsipaka azy io noho izy tsy voalaza ao amin' ireo boky heveriny ho hany avy amin' ny tsindrimandrin' Andriamanitra, dia ireo bokin' ny Testamenta Vaovao. Aminy dia fivavahana amin' i Maria (mariôlatria) izany ka sahala amin' ny fanompoan-tsampy. Manao fankalazana ihany ny Anglikana sy ny Loterana nefa tsy milaza izany ho "Fampiakarana an' i Maria" fa "Fetin' i Maria" na "Andron' i Maria" fotsiny.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fampiakarana_an%27_i_Maria&oldid=1038347"
Dernière modification le 2 Oktobra 2021, à 10:52
Voaova farany tamin'ny 2 Oktobra 2021 amin'ny 10:52 ity pejy ity.